အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: 2012
ကျမတို့ ၏ မြန်မာဆိုသော ကမုန္ဒြာကြာ
လရောင် အောက်ဘဲ အေးအေး..
၀င့်ထယ်စွာ ပွင့်စေရေး အတွက်
နွံ့ပုပ်ဘဲ နံနံ
မိုးလေဘဲ မှန် မမှန်
စေတနာ အကျိုးဟာ တန်ပြန်ရပြီပေါ့
ကမ္ဘာ့အလည် မြန်မာဆိုတာ ကြွားနိုင်ခဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သူဟာ ရောင်ခြည်
အမေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ဆိုတာ ကော်ဇောနီ
၀င့်ကြွားစွာ ပုဝါစုံချ ကြက်သရေ.
ကျမ၏ တဒင်္ဂခိုလှုံရာ အမေရိကပြည်။
လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုလိုက်ရပါသည် အမေ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:15 PM2comments
ပန်းလေးတွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ သမီး
ပန်းမပါ မှုန်နံ့ သာမပါ
ပန်းခွေချ ကန်တော့ လိုက်ပါတယ်။
အဖေ့ အသက်စွန့် ပေးဆပ်သွား
မမြင်ခဲ့ရတဲ့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်။
အဖေလွန်ခဲ့ ပြီးတဲ့ ၆၅ နှစ်အထိ
မှောင်မဲမဲ လမ်းတွေ ထဲ
အဖေ့တမင် မချန်ထားခဲ့သော်လည်း
အဖေ ပြောဖူးတဲ့ ဖာနိုင်ငံမဖြစ်စေရေး
သမီး၏ နောက်ဆုံးသွေး တစ်စက်ဘဲ ကျန်ကျန်..
သမီးတတ်နိုင်သ၍ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရည်သန်။
မလွယ်ကူပေမဲ့ ကျွန်မ မငြူစူ
အဖေ့ မျိုးဆက်သွေးဟာ ဘယ်တော့မှ မဖြူ
သူများက ကျမ အနစ်နာခံတယ် ပြောကြပေမဲ့
ဒါဟာ အဖေ့တာဝန်တွေ ဆက်လက်ထမ်းရေး
စိတ်ကြိုက် ကျမဖာသာ ရွေးတဲ့လမ်း
ပမ်းချင်သလောက် ပမ်း နွမ်းချင်သလောက်နွမ်း
တနေ့ မှာ ခြေတလှမ်းဘဲ မှန်မှန်တက်
အချိန်ကျရင် ပန်းတိုင်ရောက်မဲ့ ဇွဲ။
ကျမ အဖေ့ သမီးပါအမေ
ဘယ်သူ ကဲ့ရဲ့ ဘယ်သူမဲ့မဲ့
ဘယ်သူတွေ ဘဲ အသရေ ဖဲ့ဖဲ့
ကျမ လမ်းစဉ် မတိမ်းရွဲ့ ပါဘူး။
ကျမ ခြေလှမ်းတွေ မနဲ့ ခဲ့ပါဘူး
ကျမ ဒူးခေါင်းတွေ မပျော့ခဲ့ပါဘူး
ကျမ အဖေ့ ကိုယ်စား
မပျက်မကွက် ကျမ လာဦးတင်ပါသည်။
ကျမ ဖေ့ဖေ့သမီး အောင်ဆန်းစုကြည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:02 PM0comments
မတူရင် မတုနဲ့ 
သူဟာ..ကျားနဲ့ခြေရာတိုင်းချင်တဲ့ ကြွက်
ခွန်အား မဲ့ နုံချာ
တရား လည်း ရှိတယ်။
ကျောက်ဆောင်ထိ ဆီးစေ့သာ ကွဲပျက်
လူဘုံ အလည်မှာ သွေးပျက်
မနိုင်ပါ နစ်ရှာပေါ့ တံတွေးခွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေါက်တာ ဇာနည် တို့တရားထိုးပွဲသို့ 
ကျမ တဲ့တဲ့ ဘဲ ပစ်ပါသည်။ မှန်သွားခဲ့သူ အရှောင်မတတ်လို့ ပါ။ ဆောရီး..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:42 PM5comments
ငါ့ အဖိုး ရခိုင် ငါ့ အဖွား ရခိုင်
ငါလည်းရခိုင် ငါ့မြေးမြစ် တို့ရခိုင်
စိမ်းလမ်းခဲ့တဲ့ ဒို့ မြေ
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဒို့ မြေ
သာသနာ လွှမ်းခဲ့တဲ့ မွေးမြေ
ခုခါ နယ်ချဲ့ လက်အောက်
ကျူပ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမသတ်လိုဖူး.
ကျူပ်ရွာ မိစ္ဆာဒိဌိ မ၀င်စေလိုဖူး
တရားဓမ္မသာ ကျုပ်ရဲ့ လက်နက်
ဒါးထက်ထက် တစ်လက်တောင် မပိုင်
သတ္တိသာ ကျူပ်စိတ်ဓါတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်
သမီးတွေ အသက်ဆက် မျိုးမပျက်စေဖို့ 
လာပါစေ ကုလား ဘယ်နှစ်ကောင် တက်တက်
ကျူပ်မြေကို နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ ကာကွယ်မယ်။
(၆။ ၁၁။ ၂၀၁၂)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:07 PM0comments
နေစရာ ဒီမြေဘဲ ရှိတယ်။
နေစရာ ဒီအိမ်ဘဲ ရှိတယ်။
(၆။ ၁၀။ ၂၀၁၂)
Ref; Reuters Pictures
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:53 PM0comments
အလိုရှိသည်။ ဦးနေ၀င်း၏ စစ်တပ်
ခွေးတိုးပေါက်ကျော် လူများစု အားကြီးချိန်
ဒေသခံ အိမ်ရှင်တို့အားပျော့ချိန်
အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား ငွေစား ချိနဲ့ ချိန်
ကုလားအုပ် တဲရှင်ကို မောင်းထုတ်ပွဲ
အချိန်ဟာ စက္ကန့် နဲ့အမျှ အရေးကြီး။
မိန်းမပျိုပန်းဦး အပျိုရည်ပျက်ရန် မိနစ်ပိုင်းသာလို
ဒါးတချက် သေတဲ့အသက် စက္ကန့် မျှတို
တဲအိမ်စု မီးရှို့မိနစ်ပိုင်းနဲ့ ပြို
ကဲ ရပ်ကြည့်နေမလား ၀ိုင်းကြမလား
ရခိုင်ဆိုတာ ဒို့ မောင်နှမတွေ။
အတွေးတွေ မချော်ပါနဲ့ 
ခုခေတ် မြန်မာ ရှေးမြန်မာထက်ချာတာ သေချာ
အမိန့်သြဇာအာဏာ တည်ရာ
မကောင်းတာ လုပ်သူ ပြစ်ဒဏ်
ကောင်းတာ လုပ်သူ ဆုလာဘ်မှန်
သံဃာ ကျောင်းသား အေးချမ်းစွာ
ရခိုင်မှာ ဒါးဒုတ်ဆွဲ မီးဒုတ်ချ တဲ့ ဘင်္ဂါလီ
တုန့် နှေး ဖင့်နှေး action မမီ
လက်နက်ကိုင် ကချင် ရှမ်း ကရင် တိုင်းရင်းသား
ပြုတ်သွားပစေ တပ်မတော်၏ စေတနာ။
နင်းမိုင်း ဆွဲမိုင်း မြှုပ်မိုင်း
ဝေဟင်ပစ် မြေပြင်ပစ် လောင်ချာ
ဘင်္ဂါလီ အရေးမှာကျ ကျည်မီးမကူးပါ။
စစ်တပ် သေနတ်က ဘဲ အနေသလား
ဘင်္ဂါလီကိုဘဲ အစိုးရ ဓါတ်ကျတာလား..
စဉ်းစားကြည့် ရှာကြည့်ရမဲ့ အဖြေ
အရေးပေါ်မှ ဖြေဆေး မရှိ
တစ်တုံး မိလို့အရသာမသိ
အစိတ်သားလည်း ဒို့ မလို
စစ်သားလည်း ဒို့ မလို
အရေးပေါ်မှန်းသိ ACTION ရှိရမယ်။
ဖျက်ဆီးသူသည် ပြည်သူ့ ရန်သူ
စော်ကားသူသည် ပြည်သူ့ ရန်သူ
ဖျော့နေတဲ့ သွေး မြန်မာ မဟုတ်ဖူး
တစတစ နဲ့ သွေးတိုးစမ်း
တစ်လှမ်း တစ်လှမ်းနဲ့ မျှော့ လိုလျှောက်
တစ်ရွာက တစ်မြို့ ။ တစ်မြို့က တစ်ခရိုင်။
လွှတ်တော်ထဲတောင် ရောက်နေခဲ့သော ဘင်္ဂါလီ။
ကဲကဲ သက်တော်ရှည် ဘဘတို့ 
မာရှယ်လော က မာရှယ်လော ဘဲ
မိုးပေါ်တော့ သေနတ် မထောင်နဲ့
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာနဲ့ ၀ယ်တဲ့ ကျည်ဆန်
ဦးနေ၀င်းစစ်တပ်လို တည့်တည့် ပစ်ကြရဖို့ လိုသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:36 PM0comments
သမိုင်းပေး ဆပ်ကြရမဲ့ အကြွေး
ရခိုင် မှာ ထကြွသောင်းကျန်းသော ဘင်္ဂါလီ
ကျည်မပါ သေနတ် အလှပြ
ပစ်မိန့် မရ ကိုယ်ဟန်ပြနေကြသည်။
သမတကြီးပြောရန် မိန့် ခွန်းရေးနေ၏။
ဘင်္ဂါလီ မြန်မာလို နားမလည် ကိစ္စမရှိပါသည်။
ငါ့စကား နွားရ ထောက်ခံမဲသာ လိုသည်။
သမတကြီး tv ရိုက်ရန် ပုဆိုးရွေးနေ၏။
မိန်းမဆင်ချိတ်မက ဘာပုဆိုးက ငါနဲ့ လှမည်။
ထိပ်ပြောင် ဆံပင်ကို ကော်ထောင် တချောင်းချင်းဖီးနေ၏။
ကုလားကို ကြောက်သမှ အနော် ဖင်တုန်နေရသည်။
“ ဘင်္ဂါလီသား မိုဟာမက်၊ ဟူစိန် အပ္ပနားတွေ
ကြံ့ဖွတ် မဲထည့်ပါမည်” ဂတိပေးသွားသည်။
ဘင်္ဂလား မောင်နှမ များဖြစ်ကြသည်။
လ၀က ကငွေစား မှတ်ပုံတင်
ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဦး။ဒေါ် အမည်တတ်မည်။
ကုလားချွဲ ကုလားငို မြန်မာ မျက်ရည်လွယ်သည်။
ငွေသာရ ဘင်္ဂါလီ ၀င်လာပေ့စေ။
ရခိုင်သေလည်း ဘင်္ဂါလီ အမှန်တော့ ခြစ်တတ်မည်။
၂၀၁၅ ကြံ့ဖွတ် မဲ နိူင်မည့် အရေးသာတွေးသည်။
ကြံ့ဖွတ် ဌေးဦး ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေ၏။
ကျော်ဆန်း မော်ဒယ်တွေကြား ပစ္စည်းစစ်မစစ် အလုပ်များနေသည်။
အောင်သိန်းလင်း မှန်ကြည့် မျက်နှာပေါင်းတင်နေလေပြီ။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်တွင်း ငိုက်နေ၏။
ညကမီးမလာ အိမ်မှာ အိုက်သောကြောင့်ပါ။
နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့ မီဒီယာများ ဖလင်ကုန်နေသည်။
သတင်းကြေညာသူ shopping ထွက်နေသည်။
အင်တာဗျူးကောင်းသူကြီး မအားသေးပါ။ ဗိုလ်ချူပ်သမီး နဲ့ အ၀ှါပြုနေရ၏။
(အ၀ှါ = လူကွဲမှာကြောက်၍ လက်ချင်းချိတ်ပါတီ တက်နေခြင်း)
ငါးမင်းဆွေ အခုတော့ ဆွံ့ အ နားမကြားပြီ။
ရုရှ မှ ဘိုပြုတ်များ ခြေရှုပ်နေကြသည်။
နျူကလိယ ပရောဂျက်ပျက် ရှေုရေးကမရေရာပြီ။
အတိုက်အခံများ အတွက် အပြာလွှမ်း
ဆဲနည်းမျိုးစုံ ကျမ်းပြု လခရရေးကြိုးပမ်းရှာကြပြီ။
ဒီလို အလားအလာရှိ စစ်ခေါင်းဆောင်များ ခေါင်းဆောင်မည့်
ဟစ်တလာလို မျိုးဖြုတ်မဲ့ ကုလား လူပါးဝ နယ်ချဲ့သည်။
ရခိုင် သွေးပါ ဂျူးလို ပုန်းနေရချိန်။
အဖိုရောအမ ဘယ်လိင်ဖြစ်ဖြစ် မုဒိမ်းကျင့်ခံရမည်။
ရွှေငွေ စားစရာ ရှ်ိသမျှ လုယက်နေကြပြီ။
ကိုးသောင်းဘုရားဖြိုချ ပလီတည်ဖို့ မြေလိုနေသည်။
မြို့ တော်စစ်တွေ ဘင်္ဂါလီ အလံထောင်ဖို့ နီးပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ် မကြာမီ ရိုဟင်ဂျာအချုပ်အခြာ ဘင်္ဂလားပြည်။
ပန်းဝါစစ်ကြောင်း မြ၀တီ စစ်ကြောင်း
ဓည၀တီ စစ်ကြောင်း ရာဇ၀င်ထဲမှာသာကျန်ခဲ့ပြီ။
ဘုရင့်နောင် ရင်းခဲ့သမျှ သွေးမြေပုံ
ကျမတို့ ခေတ်ကျ ပဲ့ခဲ့ပြီ။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ တပည့်တော် မျက်နှာမပြရဲပါသည်။
ဒီစစ်အစိုးရခေတ် ရခိုင်တို့ မျက်နှာငယ်ငယ်။
ဒို့ များ၏ သမိုင်းပေးတာဝန် မည်။
ပြည်သူအားလုံး ရုံးစု ကူညီချိန်တန်ပြီ
ဘဏ္ဍာ ဆေးဝါး ထောက်ပန့် 
လက်နက်ခဲယမ်း ဒါးပေါက်ဆိန် ထွန်ခြစ်ဆူး
၀ါးချွန် မျှားချွန် ရရာ လက်နက်စုရမည်။
လောက်လေးဂွ ဂျင်ကလိ ဒါးသွေးကြရမည့် အချိန်။
စည်းရိုးကာ ခြံခတ် ညကင်းစောင့်ကြမည်။
သေတောင် အနည်းဆုံး တစ်ယောက်စီ ငရဲသို့ အဖော်ခေါ်
ကလေး လူကြီး မိန်းမယောက်ျား ဘုန်းကြီးပါမကျန်
သာသနာ မြေရွာ အသက် အရှက် ဘယ်အရာမှ မပါစေ
မြန်မာ့သွေးသည် သေသော်ထိ စွေးစွေးနီ။
ဒူးမထောက် တလက်မတောင် မပေးမဲ့ ဒို့ မြေမဟီ
ကျူးကျော်သူတွေ ကို ၀ိုင်းဝန်းတော်လှန်ကြမည်။
အစဉ်အလာနဲ့ သတ္တိ များနဲ့ ဒို့ 
မြန်မာ့အလှ ကမ္ဘာပေါ် ပန်းကောင်းပန်ဖို့ 
တူညီ ရုန်းကြ တိုက်ကြစို့ ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:46 PM0comments